प्रेमीका पुजाले खोलिन विनायजंगको यस्तो भित्री रहस्य,….(हेर्नुहोस भिडियो )। – News Nepali Dainik
प्रेमीका पुजाले खोलिन विनायजंगको यस्तो भित्री रहस्य,….(हेर्नुहोस भिडियो )।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २२, २०७७ समय: २०:५६:१९
विनयजंग बस्नेत अहिले प्रहरी हि रा स तमा छन् । बिबिसीको एक सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरका बारेमा अनर्गल कुरा गरेपछि उनी विरुद्ध उजुरी परेको हो । सपनाले विनयजंग विरुद्ध उजुरी दिएकी हुन् । विनयजंघका बारेमा सपनाका बुवा आमाले पनि केही कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । छोरी मानेकी सपनालाई रातीमा खुट्टा मालिस गर्न लगाउने गरेको आरोप सपनाका आमाबुवाको थियो ।
Last Updated on: March 6th, 2021 at 8:56 pm